देउवा आक्रामक, रामचन्द्र रक्षात्मक र कोइराला निन्द्रामा ! – YesKathmandu.com
काठमाडौं, ६ पुस । कांग्रेसको बाह्रो महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा शेरबहादुर देउवा आक्रामक, रामचन्द्र पौडेल रक्षात्मक र सुशील कोइराला निद्रामा देखिएको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा चल्न थालेको छ । नयाँ बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर अभियानमा निस्किएका देउवाले यसबीचमा कोइराला पक्षका केही प्रभावशाली नेताहरुलाई आफ्नोतिर तानिसकेका छन् । कोइराला क्याम्पका प्रभावशाली दोस्रो तहका नेतालाई भने अहिले नभई महाधिवेशनको मुखैमा तानेर पदाधिकारीको उम्मेदवरा बनाउने रणनीति देउवाको रहेको छ ।
पछिल्लो समय कोइराला पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा वैचारिक नेता चन्द्र भण्डारी देउवातिर लागेका छन् । सुशील कोइरालाले मनोनित गरेका श्याम घिमिरे समेत सम्पर्क कार्यालय देखिन थालेका छन् । त्यस्तै ललितपुर २ का सांसद् समेत रहेका प्रभावशाली नेता चन्द्र महर्जन मात्र होइन, मोरङ कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वका प्रभावशाली नेता तथा सांसद् अमृत अर्याल पनि देउवातिर खुलेका छन् । माथिल्ला नेताभन्दा तलकाहरुसँग जनाधार हुने भएकाले देउवाले पहिले जिल्ला सभापति, प्रभावशाली सांसदहरुलाई आफूतिर तान्ने रणनीति अख्तियार गरेर अगाडि बढेका छन् । देउवाले यसपाली डेढसयदेखि ३ सय मतको अन्तरमा जित्ने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ । साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।
उपेन्द्रको आरोप : प्रधानमन्त्रीको बोली सडक छाप गुन्डा र तस्कर सरदार जस्तो
डा. गोविन्द केसीले सात दिनका लागि अनसन सारे
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुबैको उपसभामुखमा कांग्रेसको दावी